Scottish Straight Cat - tsanangudzo yemarudzi
Kana iwe uri kutsvaga mhuka yakadzikama, inofadza, ine rudo uye yakanyatsogadzikana, zvino zviri nani kuti urege kuwana katsikiti yeScottish yakadzika-tsika, pakati pehama dzadzo dzakawanda. Vanoteerera uye vane mutsa, ivo vachava zvidimbu zvemhuri yose, uye vamiririri vakachena vachakwanisa kukudza vatenzi vavo pamusangano pakati pemamwe akawanda kotolyubov.
Scottish Straight Cat - ruvara
Inotendwa kuti yakawanda zvikuru yeScottish blue pryamouhie makate, asi izvi hazvisi izvo. Pakati pevose vamiririri vemarudzi aya unogona kusangana namatangi sebhuruu, rima kana kuti chena, uye mitsetse, "marble" uye tortoiseshells. Zvichienderana nemuvara wejasi, ruvara rwemaziso echiso chegungwa richasiyana, izvo zvingave zvisingabvi, zvitsvuku kana kuti zvakasvibirira, zvine tambo yemazuva.
Scottish Straight Cats breed - chimiro
MaChikoro anoonekwa kwete chete mukuratidzwa kwavo kwakanaka uye nyasha, asiwo nokuda kwekuita kwavo kwakanaka. Aya makati akabatanidzwa zvikuru neimba uye muridzi, haasaruri uye haasi inofanirwa. Kittens Straight Scots zvinowanzojairika kune tray , dzinofamba chaizvo uye dzinotamba, asi hadziri nehasha. Kazhinji, utsinye hunenge huri kure kune rudzi urwu. Katsamwisa kati chimbidzike kuenda kune imwe nzvimbo panzvimbo pokupinda mukurwisa kune anenge atadza.
Vanhu veScots vanofarira zvose zvakapoteredza, kwete kwete kuti simba ravo rakasiyana-siyana ndekwanisi kumira pamakumbo avo makumbo pasina kunyanya kwakaoma. Kudzidza ndima itsva, Yakananga Scots chengeta zvinhu zvose nepavo. Vanoda makambani, vanoona TV nemufaro, vachitamba nevana, vanogara pamaoko avo. Kusiyana nedzimwe mhuka dzakawanda, vaScots, kunyange vachida kurara, asi nekufara kukuru kugara newe pachigaro, kutarisa nehanya newe zvaunoita. Mune shoko, zviri nani kuva namakati kune avo vanoda mhuka dzakanaka uye dzakanyarara, musazviwana.
Chihuahua dog dog
Silicone pads pamakona emakati
Kupfuura kushambidza gungwa?
Mhando dzinoshamisa dzekatsi - zvinhu zvekuchengeta uye kutarisira
Mapenzi nicknames makate vakomana
Zvirwere zvenjiva uye kurapa kwavo
Imbwa iri kudonha
Tracker kune imbwa
Rudzi rwekudzivirira kwemakati
Chii chinokonzerwa nemisungo?
Suede sandals pamusana
Zvishandiso zvishongo zvemashizha 2016
Puff pastry hlama
Zvigariro zvekugadzirisa kamuri
Corner bunk bhedha
Marzipan kumba - kamukira
Nzira yekushandisa sei navigator?
VSD - zviratidzo kune vanhu vakuru, izvo vasiri vose vanoziva
Drew Barrymore achiri muduku
Nzira yekusarudza tambo?
Ciliary tick - kurapa
Nero - ndechipi ruvara rwepinhose?
Cheesecake ne raspberries - recipe
Kudya kwemanheru kune mumwe mudiwa
Rihanna, Leonardo DiCaprio, Taylor Swift nevamwe vazhinji vakapinda mutambo weCoachella
Guinea shiri shiri mazai - akanaka uye akaipa
Irritable bowel syndrome - kurapwa nemishonga yevanhu
Megan Fox akaratidza zvifananidzo zvisingaoneki zvevanakomana vatatu
Aluminium sliding windows - chii chinobatsira iyo itsva yewindo inopikira?